ओलीको दम्भ: मैले राजीनामा दिने कुरै हुँदैन | जनदिशा
ओलीको दम्भ: मैले राजीनामा दिने कुरै हुँदैन
Sahas March 1, 2021	No Comments
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने बताएका छन्। आइतबार साँझ हिमालय टेलिभिजनको ‘यक्ष प्रश्न‘’ मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने दोहोर्याएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्ड–माधव पक्षलाई आविश्वास प्रस्ताव ल्याएर देखाउन पनि ओलीले चुनौती दिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव ल्याए असफल पार्ने सामर्थ्य आफूसँग रहेको पनि उनको भनाई छ। उनले अविश्वास प्रस्ताव आए नेपाली काँग्रेस र जसपाले साथ दिनेमा विश्वस्त रहेको दावी गरे।
अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्ने अंक गणित छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपाली काँग्रेस, वा मधेसवादी दलले राजनीति गरेको कुनै अमुक र पद नपाएर छट्पटाएका व्यक्तिका लागि पार्टी खोलेको वा राजनीति गरेको हो ?’ भनेर प्रश्न गरे।
उनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलसँग ३१ सालदेखिको सम्बन्ध र मित्रता रहेको भन्दै आफू प्रजातन्त्र बचाउन लागि परेको बताए। राजीनामा गोजीमै राख्नुभएको छ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नलेख्ने र लेख्न नपर्ने दावीसमेत गरे।
‘राजीनामा लेख्दिनँ। राजीनामा लेख्नुपर्ने अवस्था होइन, छैन। मैले अरु पनि बाटा समाउन सक्छु। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर मलाई हटाउने बाटो पनि छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
उनले संसदीय दलमा पनि आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै पोहोर गरेका हस्ताक्षर प्रचण्ड माधव पक्षले अहिले बिक्री गरेको आरोप लगाए। ‘बहुमत छ भनेर छाति पिट्नु बेग्लै हो। पोहोर गरेका हस्ताक्षर अहिले बिक्री गर्नु बेग्लै कुरा हो’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपनि अदालतले राजीनामा देउ नभनेको दावी गरे। ‘मैले राजीनामा गर्ने हो भने अदालतको फैसलाले अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ’ ओलीको भनाई छ।
प्रचण्ड संसदीय दलको नेता माइतीघर मण्डलाबाट छानिएको भन्दै ‘बहुमत उहाँसँग छ भने पार्लियामेन्टबाट प्रधानमन्त्री फेरे भैगो नि’भनेर उनले चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्रीले आफू उत्तेजनामा गएर कुनै निर्णय नगर्ने पनि बताए।
‘मैले आवेश उत्तेजनामा जानु हुँदैन। उपयुक्त विकल्प भेटियो भने स्थिरतातर्फको प्रयास खासै नखज्मजिने र नबिग्रने देखियो भने राजीनामा गर्न सकिन्छ। विश्वासको मत लिन सकिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउन सकिन्छ यो त प्रकृया छ’ ओलीको भनाई छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आफूलाई ग्लानी नभएको भन्दै अस्थिरता मच्चाउन लागेकाले देश बचाउन उक्त कदम चाल्नुपरेको बताए।
Previous Previous post: झाँक्रीको टिप्पणी: ओलीको चुनाव चिन्ह ‘किरा फट्याङ्ग्रा’
Next Next post: प्रधानमन्त्रीकै नगरमा आदिवासीको उठीबास